Amnesty: Ina Makhtal ha la sii daayo - BBC News Somali
Amnesty: Ina Makhtal ha la sii daayo
Image caption Hey'adda Amnesty International
Hay'adda Xuquuqda Aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Canada inay dalka Itoobiya cadaadis ku saarto inay soo celiyaan nin Canadian ah oo dalka Itoobiya ku xiran oo loo haysto argagixisanimo.
Amenesty waxay tiri Ra'iisal Wasaaraha Canada, Stephen Harper, waa inuu ku adkeeyo in Ra'iisal Wasaaraha Ethioopia, Meles Zenawi, uu hore u soo kaxeeyo muwaadinka Canadianka ah oo la yiraa, Bashiir Makhtal Daahir,marka uu Meles imanayo magaalada Toronto oo lagu qabanayo shir-madaxeedka kooxda G20.
Amnesty waxay sheegtay in loo baahan yahay in ra'iisal wasaaraha Canada uu isku xiro martiqaadka imaatinka Zenawi iyo soo ka xeynta Makhtal. muwaadinka canadian-ka ah Bashiir Makhtal waxaa xabsi lagu xukumay sanadkii hore iyadoo lagu eedeeyay inuu taageeray jabhadda gooni u goosadka ee ONLF.
Waxaa uu ka mid ahaa 150 qof oo ciidammada Kenya ay ku qabteen xadka Soomaaliya, iyagoo ka yimid dhinaca Soomaaliya oo markaasi ay ciidammada Itoobiya ku duulayeen, waxaana markii hore lagu eedeeyay inay taageerayeen kooxaha islaamiga mayalka adag ee dalka Soomaaliya.
Makhtal waa uu beeniyay eedahaas oo dhan.